10 Ọtụtụ-jụrụ Nsogbu banyere iPhone mmelite
1.2 Kasị-jụrụ Probs
2. Weghachi iPhone
2.1 Weghachi Data
Ma gụọ 2.3 Atụmatụ na usoro
Gịnị Bụ Jailbreak
Jailbreak a maara dị ka hacking na inweta niile ohere nile ebe nke iPhone na ị na-agaghị kwesŽrŽ ọgbaghara na. Na-emekarị, a bụ nzi ụzọ ruo ma wụnye jụụ omume, Ịkpọghe handset maka ojiji na onye ọzọ cellular netwọk, ma ọ bụ abụọ.
Na N'ezie nke jailbreaking, ị na-enwe ike tinye mmezi ngwa gị iphone. Ọ kwe gị ime otú ahụ site na-agbakwunye elu na ngwa na-akpọ Cydia gị iPhone. Ọ na-anabata modding (na-agbanwe agbanwe) nke gị iPhone nnyefe oyiyi, akwụkwọ ahụaja, n'ọdụ ụgbọ mmiri, ọnọdụ mmanya, chat egosipụta, ihu igwe uwem, na keyboard, wdg
Jailbreaking na-adịghị akpọchi! Ọ bụ kpam kpam n'ihe ize ndụ free na kpam kpam iwu na-akwadoghị. All na-arụ ọrụ tupu jailbreaking na-aga n'ihu na-arụ ọrụ mgbe. Jailbreaking nanị na-agbakwụnye atụmatụ. Jailbreaking bụ n'ihe ize ndụ free na-apụghị ndum gị akwụkwọ ikike.
10 Atụmatụ na iPhone Jailbreak na iPhone Update
1). Jailbreak ada ada ma ọ bụ jailbreak iPhone mkpọka na-enye elu. Gịnị ka anyị na-eme?
Ka anya dị ka na-agbalị ọ bụla nke a nzọụkwụ n'okpuru, jide n'aka na NO ngafe koodu bụ na gị na iPhone ngwaọrụ. Nke a Umuihe mara dị ka uloanumaanu ma ọ bụ ugboelu ole na ole dị iche iche jailbreak utilities. Ọ bụrụ na ị chọrọ, ị nwere ike mfe re-enyere ya mgbe jailbreaking. Ma n'otu oge dị ka ị na-eme usoro, ga-ijide n'aka na gị iPhone na-adịghị passcode akpọchi.
1. The kasị mkpa akụkụ bụ ime ka n'aka na ngwá ọrụ ị na-agbalị iji na-ọma-akwado n'okpuru n'elu ikpo okwu na sistemụ ị na-eji.
2. Kwụpụ gị iPhone na nkwụnye ọ laghachi azụ. Ọ bụrụ na o kwere omume, na-agbalị a dị iche iche eriri USB ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ mmiri ọzọ na kọmputa.
3. Jide n'aka na gị iPhone aka femụwe bụ dakọtara na ngwaọrụ ị na-agbalị iji.
4. Ete si na jailbreak ọrụ site na kọmputa gị na re-wụnye ya na-achị achị si a rụrụ arụ wụnye.
5. Ọ bụrụ na-ekwe omume, na-agbalị jailbreaking gị iPhone si dị iche iche ma ọ bụ dị iche iche na kọmputa. Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, na ihe isi ike eleghị anya na-edina ndị gị ezigbo kọmputa. Dị ka akụkụ dee, jide n'aka na ị na-agba ọsọ dị ka onye nlekọta ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ n'ime kọmputa mbipụta. (Admin n'ihi na windo, Sudo maka Mac ọrụ)
6. megharia ntọala niile na gị iPhone. Gaanụ n'ime Ntọala> Ozuruọnụ> nrụpụta> Tọgharịa nile ntọala. Nke a ga-ghara ihichapụ ọ bụla nke gị mkpa data gị iPhone, ma ọ ga-reinstate niile ndabere usoro ntọala.
7. Ọ bụrụ na a dị iche iche na kọmputa adịghị arụ ọrụ, nsogbu nwere ike ịbụ eleghị anya nwere bit na-eme na gị iPhone onwe ya. Back gị iPhone na iTunes ma ọ bụ site iCloud. Hichapụ gị iPhone na ụlọ ọrụ ma na-agbalị jailbreak usoro ọzọ. Ị nwere ike hichaa gị iPhone site na-eme a dị ọcha weghachi site na iTunes ma ọ bụ na-aga Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na mwube
2). The jailbreak yiri ka na-arụ ọrụ ma m nwere ike ghara inwe Cydia iji wụnye, m ga-esi a netwọk njehie
1. Nke a na-eme ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na ị na-eji a ngwá ọrụ dị ka Greenpois0n na kwesịrị ị ẹkedori ha na akara ngosi iji esi jide Cydia. Gbalịa na-aga n'ime Ntọala> Ozuruọnụ> Network> na Tụgharịa na gị Okwey. (Ọ bụrụ na Okwey na-arịọ gị maka a paswọọdụ, dị nnọọ na-ebu na ya na ọhia oghere.) Ekwentị gị kwesŽrŽ-enye gị ihe njehie na mgbe ahụ reboot. Mgbe ọ na-abịa azụ, ị "ga-" ugbu a nwere Cydia.
2. Ọ bụrụ na ekwentị gị adịghị enye gị ihe njehie na reboot mgbe toggling ya ma ọ bụ na-adịghị enye gị ihe njehie, na-agbalị resetting netwọk gị ntọala n'okpuru Ntọala> Ozuruọnụ> nrụpụta> Tọgharịa nile Network Ntọala, ahụ na-agbalị toggling Okwey on ọzọ .
3. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nke nzọụkwụ n'elu nwere na-abịa n'ime edinam, gị mma nzọ bụ a sanitizing weghachi na gị iPhone mgbe ị na kụziri elu gị niile data. Jailbreak ọcha na mgbe ahụ weghachi ozi gị.
3). Gị jailbreak na-arụ ọrụ na m nwere ike inwe na Cydia ma m na-njehie ma ọ bụ enweghị ike ibudata ihe ọ bụla
Ụdi njehie na-nkịtị
aha ihe nkesa: njikọ jụrụ - na nkesa na-bụ ikekwe ala ma ọ bụ ṅụbigara. Ọ dịghị ihe ị chọrọ ime na gị ọgwụgwụ. Ka ihe atụ, m ga-esi njehie a si POSIX ugbu a na mgbe.
4). Na ị bụghị-enwe ike ịchọta faịlụ n'ihi na libactivator ngwugwu. Nke a nwere ike ịpụta na ị mkpa ndozi a ngwugwu onwe gị.
Ị hụrụ ma ọ bụrụ na ị ga-esi njehie a ị na-apụghị wụnye ihe ọ bụla si Cydia. Factually, ihe ọ bụla. Ọ bụ n'ezie a nnọọ mfe fix. Gaanụ n'ime ngwaọrụ gị Ntọala> Ozuruọnụ> nrụpụta> Tọgharịa netwọk ntọala. Nke a kwesịrị idozi ọ bụla nke i nwere na libactivator erroring si.
5). Olee otú itinye gị iPhone na mgbake mode:
1. ighikota iPhone kpamkpam gawa ma Ikwupu ya site USB / n'ọdụ ụgbọ mmiri.
2. Ịghọta ala n'ụlọ bọtịnụ.
3. Mgbe jide n'ụlọ button, ị kwesịrị ị na jikọọ na kọmputa na a USB (kacha) ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ mmiri.
4. Jidesie ala n'ụlọ bọtịnụ ruo mgbe ị na-ahụ a Jikọọ na-iTunes ihuenyo. Ugbu a unu bụ na mgbake mode.
Ịgbalaga Iweghachite ọnọdụ na ikike ekwentị anya, nanị jide ike na n'ụlọ buttons iri sekọnd.
6). Olee otú itinye gị iPhone na DFU mode:
1. Jikọọ gị iPhone nkeonwe gị na kọmputa.
2. Gbanyụọ iPhone.
3. Press ike bọtịnụ na n'ụlọ ibe maka 10 sekọnd (kpọmkwem).
4. Hapụ ike ma ịnọgide na-ejide n'ụlọ bọtịnụ ruo mgbe kọmputa beeps (hụrụ na a PC) dị ka a USB ngwaọrụ a ghọtara.
5. A sekọnd ole na ole 'mgbe e mesịrị, iTunes kwesịrị ịchọpụta gị iPhone.
6. Ọ bụrụ na ndị Weghachi Logo bụ ugbu na ihuenyo, ị na-Iweghachite ọnọdụ, ọ bụghị DFU.
7). Olee otú Idozi na-agwụcha Reboot Loop isi ike na gị na jailbroken iPhone
Ugbu a, na jailbreak maka iPhone na-agba ọsọ iOS 6.1 / 6.0 bụ, a otutu unu na-na na gị iPhone site na wụnye Tweaks, na-agbanwe gburugburu na-eme ụdị nile nke tinkering. N'ụzọ dị mwute, n'ihi na mkpụmkpụ nke a jailbreak ebe dị otú ahụ ogologo oge, mmepe na ọ dịghị a otutu oge iji jide n'aka na ha Tweaks na-arụ ọrụ na-enweghị ihe ọ bụla glitches on iOS 6.x, nke pụtara na wụnye ụfọdụ Tweaks pụrụ ịkpata achọghị omume dị ka mkpọka ma ọ bụ ọbụna-adịghị agwụ agwụ reboot cycles.
8). Ọ bụrụ na ị nwere a na-arụ ọrụ iPhone nwere ike ime ka oku, ma gị iPhone bụ laggy ma ọ bụ nanị eme iju, ọ pụrụ nnọọ ịbụ ngwa nsogbu. Ndị na-esonụ nwere ụzọ ụfọdụ ka ịchọpụta ngwa nsogbu.
• Ị na-tọrọ atọ na ihe ngwa na-apụghị tufuo ya.
• ndụ batrị na-agwụ ike ngwa ngwa karịa ka ị tụrụ anya ruru ka ndabere Filiks.
• égwu ikukota ka anya dị ka ị malite ha.
1. Force-ịkwụsị ọrụ omume nwere ike idozi nsogbu na otu ngwa na ngalaba na-akpọ "Force ịkwụsị ihe iPhone Ngwa".
2. Ịgbanyụ gị iPhone ọkọkpọhi gị ka a ghọtara ala. The ngalaba na-akpọ "reboot gị iPhone" na ike arapara ihe ọ bụla na-adịghị adịte nsogbu ahụ na-ewere ọnọdụ.
3. Iwepu ma ọ bụ nkwarụ ọjọọ, mebie, ma ọ bụ ndị na-emegiderịta omume-karịsịa ndabere Filiks na ngalaba na-akpọ "Weghachi na-agbake Your iPhone" -can enyemaka.
4. Nkwekọrịta emelitere version nke ngwa ahụ na-ọma-ekwekọghị na gị femụwe.
5. Ọ pụrụ ịbụ ihe ọjọọ ma ọ bụ njọ ngwa ntọala. Gaa na Ntọala → General → Tọgharia → Tọgharia All Ntọala, nke ga-tọgharịa kasị ngwa nakwa dị ka usoro nhazi ntọala.
9). Idozi ihe iPhone Nọgidesiri na Apple Logo
Mgbe jailbreaking, emelite sistemụ, ma ọ bụ na-eweghachiri site na iPhone ndabere, ihe isi ike mgbe ụfọdụ ime na nke gị iPhone agaghị buut kwesịrị ekwesị. Nọ n'ọnọdụ a, gị iPhone nwere ike ina rapaara na Apple logo, ma ọ bụ mgbe ụfọdụ na-adịghị agwụ agwụ akaghị nke ịgbanyụ - ma nke ijere ngwaọrụ unusable.
Na ọtụtụ nke ikpe, ị pụrụ idozi nsogbu nile a site n'itinye gị iPhone n'ime mbịaghachi mode na Iweghachi ya si ndabere. Iji mee nke ahụ, na-eso ntụziaka ndị a:
1. Jikọọ gị iPhone si eriri USB kọmputa gị, ma ọ bụghị gị iPhone.
2. Gbanyụọ iPhone. Ọ bụrụ na gị iPhone agaghị gbanyụọ na omenala n'ụzọ, dị nnọọ ejidesie buttons ruo mgbe ihuenyo aga ọchịchịrị.
3. Ozugbo ị tụgharịa iPhone anya, pịa n'ụlọ bọtịnụ nke iPhone na ikwunye na eriri USB gị iPhone si n'ọdụ ụgbọ mmiri njikọ.
4. Mgbe ọ na-enyo na, na-na ịpị n'ụlọ button ruo mgbe iTunes logo-egosi na ihuenyo.
5. Ị ga-amaghị gị iPhone bụ ugbu a na mgbake mode n'ihi a window na iTunes ga-agwa gị.
6. Ị nwere ike mgbe amalite nweghachite site na ịpị "Weghachi" bọtịnụ na iTunes window.
10). Idozi maka Cydia akụghịna Nsogbu
• Jikọọ na gị iPhone site ma SSH, mobile ọnụ, ifile, diskaid ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ ụdị USB faịlụ usoro nchọgharị. Agagharị na-/ var / lib / apt / anatara /
• Hichapụ cydia.zodttd-1.com_repo_cydia_dists_stable_main_binary-iphoneos-arm_Packages.
• Wụnye ọhụrụ melite iji Cydia idozi nke a.
Ibufee ọdịnaya site na iPhone ka Computer
A zuru okè iPhone Nyefee Ngwá Ọrụ maka Ị
Ịgbanwee si gam akporo ka iPhone
17 Best Free ngwa ọdịnala na iPhone
Nyefee faịlụ site Motorola ka iPhone
Ịgbanwee si Samsung ka iPhone
Bugharịa Data si iPhone ka Samsung
Nyefee faịlụ site iPhone ka Computer
Nyefee Data si Blackberry ka iPhone
> Resource> iPhone> 10 ọtụtụ-jụrụ Nsogbu banyere iPhone Mmelite na iPhone Jailbreak